Daboolka Jadwalka Jadwalka
Bandhigga Soo-Bixinta EZ Tube
Dhar Daabacan oo Custom ah
Miyaad ogtahay rubuca koowaad, saamiga deynta dawlada ee aaga yuroon inay dhaaftay 100% markii ugu horaysay, oo gaadhay 100.5%. Warar badan oo adduunka ah, Noocee hubi wararka CFM maanta.
by admin on 07-23-21
1. Kal-fadhigii 138-aad ee Guddiga Caalamiga Olimbikada (IOC) ee lagu qabtay Tokyo, Japan, ayaa si rasmi ah loo qaatay, isagoo ku daray "inbadan oo United" (wada jir ah) hal-ku-dhigga Olambikada. Hal-ku-dhigga Olambikada wuxuu tan iyo markaas noqday "mid dhaqso badan, sareysa, ka xoog badan United". Aasaasihii Amazon ...
Ma rabtaa inaad ogaato wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan sheeko-wade coronavirus? Ma rabtaa inaad wax ka ogaato Tuulada Olimbikada ee Tokyo, Japan? Ma rabtaa inaad wax ka ogaato isku dhaca Afghanistan iyo Taliba ...
by admin on 07-20-21
1. Dhawaan, khilaafka u dhexeeya ciidamada dawladda Afgaanistaan ​​iyo xoogagga Taalibaan wuxuu noqday mid sii xoogeysanaya, xaaladda amniguna waa ay ka sii dartay, taasoo keentay in tiro aad u badan oo reer Afghanistan ah ay qaxooti noqdaan. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in amni xumo iyo xadgudub ...
Miyaad ogtahay in kobaca dhaqaalaha adduunka la filayo inuu gaaro qiyaastii 5.6% sanadka 2021, heerka ugu koritaanka degdegga badan ku dhowaad 50 sano? Ma rabtaa inaad ogaato wararka adduunka? Fadlan hubi wararka CFM ee t ...
by admin on 07-16-21
1. Annaga: Bishii Juun, CPI waxay ka kacday 5.4% sanad ka hor, heerkii ugu sarreeyay illaa Ogosto 2008, iyadoo la filayo 4.9% iyo qiime hore oo ahaa 5.0%. CPI waxay kor u kacday boqolkiiba 0.9 bishiiba bishii Juun, tan ugu sarreysa tan iyo Juun 2008, halka xuddunta CPI ay kor u kacday boqolkiiba 4.5 marka loo eego sanad ka hor, heerkii ugu sarreeyay tan iyo 1991 ...
Ma ogtahay dilkii madaxweynihii Haiti? Ma rabtaa inaad wax ka ogaato Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka? Ma ogtahay kuleylka taariikhiga ah ee Mareykanka Fiiri hubi wararka CFM ee t ...
by admin on 07-13-21
1. Madaxweynaha Haiti Jovernail Moise waxaa lagu dilay gurigiisa 7-dii. Raiisel wasaaraha Haiti wuxuu ku sheegay war idaacadeed in 1-dii subaxnimo ee maalintaas, Moise ay weerareen oo ay ku dileen gurigiisa koox aan la garanayn oo ah “mintidiinta Isbaanishka iyo Ingiriiska ku hadla”. 2.Claudio Olivera, ...
Ma ogtahay toddobo iyo labaatan sano ka dib aasaaskii Amazon, Bezos ayaa si rasmi ah uga degtay xilka agaasimaha guud. Warar dheeraad ah, Nooc hubi wararka CFM maanta.
by admin on 07-09-21
1. Rubucii ugu horreeyay, Midowga Yurub wuxuu haystay koonto hadda socota oo dhan 116.5 bilyan oo euro. Wadarta guud, Midowga Yurub wuxuu lahaa dheeri ganacsi oo dhan 99.2 bilyan oo alaab ah iyo 33.1 bilyan oo euro oo adeegyo ah rubacii koowaad ee sanadka, iyadoo dakhli hordhac ah oo dheeri ah uu ahaa 4.7 bilyan oo euro iyo mid labaad oo ah ...
Ma ogtahay waxa loo yaqaan 'COVID-19 pass'? Ma rabtaa inaad wax ka ogaato mowjadaha is-casilaadda ee Mareykanka? Ma rabtaa inaad ogaato tallaalka adduunka? Si fiican u hubi wararka CFM maanta.
by admin on 07-06-21
1. Laga soo bilaabo Luulyo 1, waqtiga maxalliga ah, "COVID-19 pass" oo heer sare ah ayaa si rasmi ah looga bilaabay dalalka xubnaha ka ah EU iyo sidoo kale Norway, Iceland, Liechtenstein iyo dalal kale. Waqtigan xaadirka ah, in kabadan 200 milyan oo shahaadooyin ah ayaa laga soo saaray Midowga Yurub. 2.CNBC: iyadoo kororka ...
Ma ogtahay marka laga reebo qaar ka mid ah suuqyada reer Galbeedka, soo-galootiga caalamiga ah ee sannadkan fadhiisan doona. Warar dheeraad ah, nooc ka hubi wararka CFM maanta.
by admin on 07-02-21
1. Kuuriyada Koofureed waxay soo saartay in kabadan 1000 nooca Shiinaha ah oo ah nooc bir lagu dhaqaajin karo, iyo sidoo kale in kabadan 600 oo nooc oo laxiriira Kuuriya, in kabadan 500 sano kahor. Warbaahinta Kuuriya ayaa sheegtay in kani yahay kii ugu horreeyay ee biraha Kuuriya laga dhaqaajiyo. Marka lagu daro nooca la dhaqaajin karo ee birta, waxaa sidoo kale jira qaybo ...
Ma dooneysaa inaad ogaato suuqa gawaarida la isticmaalay ee Jarmalka ay saameeyeen Cudurka 'COVID-19'? Ma rabtaa inaad ogaato wabiyada iyo tayada biyaha dhulka hoostiisa ee Japan? Ma rabtaa inaad ogaato saameynta ho ...
by admin on 06-29-21
1. Iibinta gawaarida korontada ee aduunka waxay ka badnaan doontaa gawaarida shidaalka shidaalka sanadka 2033, shan sano ka hor sidii markii hore la filaayay. Iibka gawaarida aan korontada ku shaqeyneyn ayaa la filayaa inuu hoos ugu dhaco wax ka yar 1 boqolkiiba suuqa baabuurta adduunka marka la gaaro sanadka 2045. Awoodda guud ee gawaarida korontada ku shaqeysa ayaa xilli hore imaan doonta ...
Ma ogtahay, Laga bilaabo Juun 26 illaa 27, Kaliforniya waxay wajihi doontaa heerkul sarre oo sarreeya. Warar badan oo adduunka ah, sifiican u hubi wararka CFM maanta.
by admin on 06-25-21
1. Sida ku cad warbixinta maalgashiga aduunka ee 2021 ee uu soo saaray shirkii Qaramada Midoobay ee ganacsiga iyo horumarinta, maalgashiga tooska ah ee caalamiga ah ee caalamiga ah ayaa la filayaa inuu hoos udhaco isla markaana uu dib u soo laabto sanadka 2021, iyadoo kororka 10% ilaa 15%, laakiin wali wuu noqon doonaa ilaa 25% ka hooseeya heerka dir shisheeye ...
Ma rabtaa inaad ogaato ogeysiiskii ugu dambeeyay ee ku saabsan Ciyaaraha Olimbikada iyo Ciyaaraha Naafada ee Tokyo? Ma rabtaa inaad ogaato saameynta cudurka faafa uu ku yeeshay Jarmalka? Ma rabtaa inaad ogaato qatarta sheekada mutant c ...
by admin on 06-22-21
1. Rubucii ugu horreeyay, Macaamiisha Kuuriyada Koonfureed waxay xisaabiyeen 7% wadarta guud ee qarashyada ku baxa ciyaaraha mobilada, oo kaalinta afraad ka galay adduunka, kana dambeeya Maraykanka, Japan iyo Shiinaha. Marka laga eego aragtida hoose, cayaaraha ugu qaalisan ee macaamiisha ay ku iibsadaan qalabka, sida mobilka ...